बाढीले रामग्राम क्षेत्रमा ८ करोड बढीको भौतिक संरचना क्षति - radiosatellite
परासी,१२कात्तिक गत भदौ ११ गते आएको बाढीका कारण पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रमा ८ करोड बढीको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । पूर्ण र आंशिक रुपमा क्षति पुगेका संरचनामा पक्की र कच्ची घर तथा गोठ छन् । पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका संरचना २५ वटा छन् । ४ वटामा आंशिक क्षति पुगेका छ । नगरपालिकाको निर्णयअनुसार पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका संरचनालाई २५ हजार, आंशिक क्षति पुगेकालाई १० हजार र गोठको क्षतिलाई ५ हजार राहत उपलब्ध गराइने छ ।
नगर स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सबैभन्दा बढी वडा नं. १७ मा १ करोड २८ लाख, वडा नं ९ मा ९८ लाखको क्षति पुगेको जानकारी दिइएको थियो । सबैभन्दा कम भौतिक संरचनामा क्षति पुगेका वडाहरुमा वडा नं. १० मा २ लाख ७८ हजार र वडा नं. ५ मा ३ लाख ४३ हजार रहेको छ । अन्य वडाहरुमा १५ देखि ७४ लाख गरी कुल ८ करोड ३१ लाख रुपैयाँको क्षति पुगेको नगर प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।
संकलन गरिएको क्षतिको सबै विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । क्षतिको विवरण संकलन भएपनि अधिकांश प्रहरी मुचुल्का बिना रहेकाले राहतका लागि अनिवार्य प्रहरी मुचुल्का पेश गर्न नगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ । यसैबीच बैठकले झरही र रावन खोलालाई सफा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यसैगरी असोजको अन्तिम सातादेखि परेको वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेको विवरण संकलन गर्न लागिएको नगर प्रमुख गुप्ताले जानकारी दिए । वर्षाबाट धानबालीमा क्षति पुगेका किसानहरुको राहतका लागि गहुँमा अनुदान दिने नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसका लागि ३६ लाख बराबरको ५१ टन गहुँको बिउ खरिद गर्न लागेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्र प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । कात्तिकको अन्तिम सातादेखि वितरण गरिने गहुँको बिउमा ५० प्रतिशत रकम किसानले व्यहोर्नु पर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।